Caalamka oo ka hadlay natiijada Kenya - BBC Somali - Warar
Caalamka oo ka hadlay natiijada Kenya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 Maarso, 2013, 16:10 GMT 19:10 SGA
Xoghayaha Arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry, ayaa u hambalyeeyay dadka reer Kenya inay si nabad ah u cadeeyeen iyo inay natiijada ay u sugeen si dulqaad leh.
Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Maraykanka John Kerry.
Wuxuu ku tilmaamay doorashada fursad taariikhi ah, oo ay dadka si wada jir ah ku dhisanayaan mustaqbalkooda.
Wasiirka Afrika ee Britain Mark Simmons, ayaa ugu baaqay dhinacyada oo dhan inay dulqaad sameeyaan, wuxuuna sheegay in muran walba lagu xaliyo maxkamada. Wuxuu sheegay Britain inay sii wadayso la shaqaynta ammaanka, iyo horumarka Kenya.